I-Etourism co., Ltd ('i-Etourism', 'i-Etour''we', 'thina', 'yethu') sizibophelele ekukhuseleni nasekuhlonipheni imfihlo yakho yedatha kunye nokuthobela imigaqo-nkqubo yokukhuselwa kwedatha kunye nezibonelelo eziphantsi kweDatha yoBuntu (Ubumfihlo) I-Ordinance ('iOrdinance').
Singaqokelela, sisebenzise, ​​sisebenzise kwaye sibhengeze ulwazi lwakho xa usebenzisa le webhusayithi (le 'Webhusayithi') kunye neenkonzo ezibonelelwa yi-Etourism ngale Webhusayithi ('Iinkonzo'). 'Wena' '' 'kunye' wakho 'xa usetyenziswe kulo Mgaqo-nkqubo wabucala ubandakanya nawuphi na umntu ofikelela kule Webhusayithi okanye asebenzisa iiNkonzo.
Lo mgaqo-nkqubo wabucala ubeka isiseko kunye nemigaqo eqokelelwa yi-Etourism, iinkqubo, ukusebenzisa kunye / okanye ukuchaza ulwazi lwakho olufunyenwe kuwe xa ufikelela kule Webhusayithi kunye / okanye usebenzisa iiNkonzo. Olu lwazi lungabandakanya ulwazi lomntu siqu olunxulumene okanye olunxulunyaniswa nomntu othile onje ngegama, idilesi yokuhlala, inombolo yomnxeba kunye nedilesi ye-imeyile ('iiNkcukacha zobuqu').
Nceda ufunde le Mgaqo-nkqubo wabucala ngononophelo. Ngokutyelela le Webhusayithi, uyavuma ukuqokelelwa, ukuqhubekekisa, ukusebenzisa kunye nokuchaza iiNkcukacha zakho zobuqu njengoko kucacisiwe kulo Mgaqo-nkqubo wabucala.
I-Etourism igcina ilungelo lokuhlaziya, ukulungisa okanye ukuguqula imigaqo yale Mgaqo-nkqubo wabucala okanye nayiphi na inxalenye yayo ngaphandle kwesaziso sangaphambili, kunye nokufikelela kwakho kule Webhusayithi okanye ukusetyenziswa kweeNkonzo kubonisa ukwamkelwa komgaqo-nkqubo wabucala. Ukuba awuvumelani nayo yonke imiGaqonkqubo nemiGaqo-nkqubo yaBucala kunye / okanye naluphi na uhlaziyo olulandelayo, izilungiso okanye uhlengahlengiso emva koko, kuya kufuneka uyeke ukufikelela okanye kungenjalo usebenzise le Webhusayithi kunye neeNkonzo.
Ngokuhambelana, nceda undwendwele eli phepha ukuba unqwenela ukufikelela kunye nokujonga ingxelo yangoku yalo Mgaqo-nkqubo wabucala.
Singaqokelela iiNkcukacha zoMntu malunga nawe osinika zona ngelixa usebenzisa leWebhusayithi kunye nolwazi malunga nendlela oyisebenzisa ngayo le Webhusayithi ukubandakanya xa uvula iakhawunti yakho yomsebenzisi ('iAkhawunti yoMsebenzisi'), undwendwela le webhusayithi okanye ugcinele nayiphi na Iinkonzo ezifunwayo okanye usebenzisa Iinkonzo.
I-1) Ukuvula iAkhawunti yakho yoMsebenzisi
Xa uvula nathi iAkhawunti yoMsebenzisi okanye uhlengahlengisa nayiphi na ingcaciso yeAkhawunti yakho yoMsebenzisi, sinokuqokelela iiNkcukacha zobuqu, ezinjengegama lakho, idilesi ye-imeyile, igama lomsebenzisi, iphasiwedi nenombolo yomnxeba.
I-2) UkuHanjiswa kweeNkonzo okanye ukuSebenzisa iiNkonzo.
(a) Xa undwendwela le Webhusayithi, ubekelela kuyo nayiphi na iiNkonzo ezifunwayo okanye usebenzise iiNkonzo, sinokuqokelela kwaye sisebenzise ulwazi oluthile (olunokuqulatha iiNkcukacha zakho zoMntu okanye lunokuqulatha ulwazi olungaziwayo ngobuqu kodwa nangona kunjalo luqhagamshelwe kwiiNkcukacha zoBuqu) kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwezo zibekwe apha ngezantsi: Iikopi zembalelwano (nokuba nge-imeyile, umyalezo wangoku okanye umyalezo wobuqu okanye ngenye indlela) phakathi kwakho nathi.
(b) Iinkcukacha zokusetyenziswa kwale Webhusayithi (kubandakanya idatha yendlela, idatha yendawo kunye nobude beeseshoni zabasebenzisi).
(c) Ingxelo kunye neempendulo kuphando olwenziwe yi-Etourism enxulumene neenkonzo ezinokushicilelwa, zisasazwe okanye zisasazwe yi-Etourism.
(d) Ulwazi oluqokelelweyo ngokuzenzekelayo luze lugcinwe kwiserver yethu ngokusebenzisa okanye ukufikelela kule Webhusayithi (kubandakanya igama lokungena kunye nephasiwedi yeAkhawunti yakho yoMsebenzisi, ikhomputha yakho ye-Intanethi Protocol (IP) idilesi, uhlobo lwesikhangeli, ulwazi lwebrawuza, amaphepha atyelelweyo, Iindawo zangaphambili okanye ezalandelayo ezandwendwela).
Ulwazi lobuqu kunye nenye idatha esiyiqokelele kuwe inokudluliselwa kuyo, yenziwe, kwaye ilondolozwe kumaseva ethu.
I-Etourism iya kusebenzisa imizamo efanelekileyo yokugcina iinkqubo zomzimba ezifanelekileyo, ze-elektroniki kunye nezombutho ukuqinisekisa ukuba uLwazi lwaBucala kunye nenye idatha iphathwa ngokukhuselekileyo kwaye ngokuhambelana nale Mgaqo-nkqubo wabucala, kunye nokukhusela idatha enjalo ekufikeleleni okungagunyaziswanga okanye utshintsho olungagunyaziswanga, ukubhengeza okanye ukutshatyalaliswa kwedatha.
Nje ukuba sifumene ulwazi lwakho, siya kusebenzisa iinkqubo ezingqongqo kunye neempawu zokhuseleko ukuzama ukunqanda ukufikelela okungagunyaziswanga. Ukondla akuboneleli nakuphi na ukumelwa, ukuqinisekiswa okanye ukwenza into yokuba ulwazi lobuqu osinike lona luya kukhuseleka ngalo lonke ixesha, kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba le-Etourism lizalisekisile uxanduva lwayo naphantsi kwazo naziphi na iimeko kuya kufuneka u-Etourism abe noxanduva lwalo naluphi na ilahleko, ukonakala, iindleko kunye neenkcitho. osenokuva ubunzima okanye uvele ngenxa yokufikelela okungagunyaziswanga koku okanye ukusebenzisa iiNkcukacha zobuqu.
Zonke izinto ezihlawulelwayo zenziwa umntu wethu okhethiweyo wesithathu weenkonzo zokuhlawula intlawulo (PayPal) ziya kubhalwa ngokufihliweyo kusetyenziswa itekhnoloji ye-encryption online. Unoxanduva lokugcina iphasiwedi oyikhethileyo iyimfihlo kwaye ungabelani negama lakho neliphi na iqela lesithathu.
Ukuzondla akuyi kuthengisa okanye ukurentisa iiNkcukacha zakho zobuqu kubantu besithathu.
I-Etourism izakusebenzisa iiNkcukacha zobuqu kunye nenye idatha eqokelelwe kule Webhusayithi okanye xa usenza ukuthenga iiNkonzo ukwenza iAkhawunti yakho yoMsebenzisi, ukukunika iinkonzo, ukuphucula le Webhusayithi kunye neeNkonzo, nokunxibelelana nawe ngokunxulumene neeNkonzo. .
Injongo yokusebenzisa iiNkcukacha zobuqu okanye ezinye iinkcukacha kukufikelela ngokukhawuleza ekuthengeni, inkxaso yabathengi engcono kunye nesaziso esisexesheni seenkonzo ezintsha kunye nokunikezelwa okhethekileyo.
Ngamaxesha ngamaxesha singabelana kwaye sibhengeze iiNkcukacha zoBuqu kunye nenye idatha kubantu besithathu, abanye kubo abanokufumaneka ngaphandle kwelizwe lakho. Iimeko apho ukwabiwa okunjalo nokwazisa kuya kwenzeka khona kungabandakanya umda, oku kulandelayo:
I-1) Ukugqibezela ngempumelelo ukubhuka kwakho okanye kungenjalo usebenzise iMigaqo yokusebenzisa.
I-2) Ukuba undwendwele, kuMsebenzi ofanelekileyo onxulumene neeNkonzo osele ugcinele okanye uceba ukubhuka.
I-3) Ukuba uyi-Operator, kuye nakuphi na undwendwelo olunxulumene neeNkonzo ozinikezelayo.
I-4) Kwinkampani yethu yesithathu ebonelela ngeenkonzo (kubandakanywa noGoogle Analytics) esizibandakanyayo ukulungiselela ukwenziwa kweenkonzo ezithile egameni lethu, ezinje ngeenkonzo zokusingathwa kwewebhu, ucazululo lwedatha, intengiso, uphando kwimakethi, nokubonelela ngenkonzo yabathengi.
I-5) Ukuba ukuya kuthi ga kwinqanaba elifunwa nguwo nawuphi na umthetho osebenzayo, i-odolo yenkundla okanye izicelo zalo naliphi na igunya likarhulumente ukwenza oko kuxelwa.
I-6) Kubacebisi bethu, iiarhente okanye amanye amaqela achaphazelekayo ukuze akhusele amalungelo kunye nepropathi ye-Etourism.
I-7) Ngayiphi na enye into, kuye nawuphina umntu wesithathu imvume yakho ebhaliweyo ebhaliweyo.
Kunokubakho amakhonkco akhoyo kuleWebhusayithi anokukhokelela ekubeni ushiye le Webhusayithi kunye / okanye usiwe kwezinye iiwebhusayithi zomntu wesithathu. Kuya kufuneka uqaphele ukuba naluphi na ulwazi lobuqu olunika ezi webhusayithi zoluntu alukho kulomgaqo-nkqubo wabucala, kwaye u-Etourism akanoxanduva lokulahleka, ukonakala, iindleko okanye inkcitho onokuthi uva ubunzima okanye ungene malunga nokunikezela okanye ukwenza Iinkcukacha zakho ezifumanekayo okanye enye idatha kwiiwebhusayithi zomntu wesithathu.
Ufikeleleko lweDatha kunye nokulungiswa
Unokufikelela kwaye ulungelelanise iiNkcukacha zakho zoBuntu ngale Webhusayithi okanye wenze ukufikelela kwidatha okanye isicelo sokulungisa ngokuthumela isicelo sakho nge-imeyile kwi management@koreaetour.com. Xa usingatha idatha yokufikelela okanye isicelo sokulungiswa, sinelungelo lokujonga ukuba ngubani lowo ucelayo, ukuqinisekisa ukuba ungumntu onelungelo lokufumana idatha okanye isicelo sokulungiswa. Incwadi yokhuseleko lokugcina idatha igcinwa njengoko ifuneka phantsi kommiselo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nale Mgaqo-nkqubo wabucala, nceda unxibelelane nathi nge-imeyile apha management@koreaetour.com.
Igqityelwe ukuvuselelwa ngoJuni 13th, 2018
Imigaqo yokuTshintshiselana nge-E-Commerce
Isahluko 1. Imigaqo ngokubanzi
Inqaku 1. Injongo
Isizathu sale Migaqo neMiqathango ye-Etourism co., Lt Intengiselwano ngeMali ye-elektroniki kukuseka ubudlelwane phakathi kweNkampani kunye naBasebenzisi malunga noThengiso lweMali nge-Elektroniki, ngokubhekisele ekusebenziseni komsebenzisi Paypal ebonelelwe kwiwebhusayithi ye-Intanethi (https: // koreaetour). com / apha "IWebhusayithi") eqhutywa yi-Etourism co., ltd ("Inkampani").
Inqaku 2. Iingcaciso
La magama alandelayo asetyenziswe kule Migaqo neMiqathango aya kuba nale ntsingiselo ilandelayo.
1. "Intengiselwano yezeMali ye-Elektroniki" okanye "i-EFT" iya kuthetha nakuphi na ukuthengiselana apho inkampani ibonelela ngenkonzo yemali ngombane ngezixhobo ze-elektroniki, ezisetyenziswa ngabasebenzisi ngendlela ezenzekelayo ngaphandle kokujongana nobuqu okanye nokunxibelelana ngokuthe ngqo nabaqeshwa beNkampani.
2. "Intlawulo yeNtlawulo ye-Elektroniki" okanye "i-EPT" kuthetha ukuthengiselana ngemali apho umntu owenza intlawulo (“Umhlawuleli”) avumela iNkampani ukuba isebenzise indlela yokuhlawula ngombane kwaye idlulisele intlawulo kumntu ofumana intlawulo (“Payee”) .
3. “Isixhobo se-Elektroniki” sithetha isixhobo esisetyenziselwa ukuhambisa okanye ukuhambisa ulwazi ngenkqubo yemali ye-elektroniki, kubandakanywa ngaphandle kwemida, isishumali semali esizenzekelayo, umatshini wokuhambisa umbane ngokuzenzekelayo, isiphelo sentlawulo, ikhompyuter, umnxeba okanye ezinye izixhobo ezisasaza okanye zisebenza ngombane.
4. "Ukufikelela kwimithombo yeendaba" kubhekisa okanye ulwazi olusetyenziselwa ukuTshintshiselana ngokuThunyelwa kwi-EFT okanye ukuqinisekisa ukuthembeka nokuchaneka kweenkcukacha zentengiselwano, kwaye zichazwe kwiNqaku 2 Item 10 yoMthetho weNtengiselwano ngeMali ye-Elektroniki, kubandakanywa amakhadi e-elektroniki okanye idatha ye-elektroniki efanayo ), isatifikethi phantsi komThetho woTyikityo lweDijithali, inombolo yomsebenzisi ebhaliswe ngamaziko emali okanye amashishini ezemali akwi-elektroniki, ulwazi lomsebenzisi lwebhayifayile okanye ipaswedi efunekayo ukusetyenziswa kwezo ndlela okanye ulwazi.
5. "Inombolo yomsebenzisi" ithetha nayiphi na indibaniselwano yamanani kunye nabalinganiswa abakhethwe nguMsebenzisi nabamkelwe yiNkampani ngenjongo yokuchonga loo Msebenzisi kunye nokuSebenzisa.
6. Igama elithi "Iphasiwedi" lithetha nayiphi na indibaniselwano yamanani kunye nabalinganiswa abakhethwe nguMsebenzisi kwaye bavunywa yiNkampani ngenjongo yokuchonga loo msebenzisi kunye nokukhusela ulwazi lomsebenzisi.
7. "Umyalelo weTransekshini" uthetha ukuyalela komsebenzisi kwiziko lezezimali okanye kwinkampani yezezimali nge-elektroniki ukwenza inkqubo ye-EFT ngokwesivumelwano se-EFT.
8. "Impazamo" ibhekisa kulo naliphi na ityala apho i-EFT ingenzelwanga khona ngokuhambelana nomSebenzi weNtengiselwano okanye isivumelwano se-ETF ngaphandle komsebenzisi okanye ngokungakhathali.
9. Ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kweli nqaku okanye amanye amaNqaku aMiGaqobelo, onke amagama aya kulawulwa yimithetho efanelekileyo enje nge-Elektroniki yokuTshintshana kweMali.
Inqaku 3. Ukunikezelwa kwengxelo kunye nokulungiswa kwiMeko nakwiimeko
1. Inkampani iyakuthumela le miGaqobelo kunye neMiqathango kwindawo ngaphambi kokuba uMsebenzisi enze i-EFT ukuze uMsebenzisi akwazi ukukhangela iinxalenye zalo Mgaqo kunye neMeko.
2. Inkampani, ngokwesicelo soMsebenzisi, iya kusasaza (kubandakanya ukudluliselwa nge-imeyile) ikopi yale Migaqo neMeko kuMsebenzisi ngendlela yoxwebhu lwe-elektroniki.
3. Kwimeko apho inkampani ilungisa le Migaqo neMiqathango, iNkampani iya kwazisa abaThumeli ngokuthumela iiMeko neMeko ezilungisiweyo, ungadlulanga inyanga enye ngaphambi komhla wokuqalisa wayo, kwiscreen apho kufakwa ulwazi lwentengiselwano ngezezimali kwiwebhusayithi yeNkampani. .
Inqaku 4. Uxanduva lweNkampani
1. Inkampani iya kuba noxanduva lwawo nawuphi na umonakalo okanye ilahleko eyenziwe kuMsebenzisi ngenxa yeengozi ezibangelwe kukuzonwabisa okanye ubuqhetseba bokuFikelela kwiMidiya (kuphela ukuba iNkampani ayikhuphe, umsebenzisi okanye umlawuli woFikelelo kwiMidiya) okanye ngexesha lokuhambisa ngombane okanye ukuqhutywa kwenkqubo yesivumelwano okanye ukuThunyelwa kwemiyalelo.
2. Ngaphandle kwecandelo elingasentla, iNkampani ayiyi kuba noxanduva lomonakalo okanye ilahleko kuMsebenzisi nakwezinye iimeko ezilandelayo:
A. Umonakalo okanye ilahleko yenzeke kuMsebenzisi ngenxa yobusela okanye ubuxoki bokuFikelela kwiMidiya apho inkampani ingenguye okhuphayo.
B. Umsebenzisi uyaboleka, anikezwe naliphi na iqela lesithathu elisetyenzisiweyo, okanye elinikelweyo ngenjongo yokudlulisela okanye ukubonelela njengokhuseleko, Ukufikelela kwiMidiya, okanye ubhengeze okanye utyeshela i-Media yakhe yoFikelelo nangona esazi okanye esazi ukuba Umntu wesithathu angenza i-EFTs ngokusebenzisa iMedia's Access Media ngaphandle kwemvume.
C. Ngaphandle kokusebenzisa uMsebenzisi weNtengiselwano, iNkampani ayisayi kuba luxanduva lwalo naluphi na ukulibaziseka okanye ukusilela ukucwangcisa Inkonzo ye-EFT kwimeko yomnyinyiva womsitho onje ngeentlekele zendalo, ukumnyama, umlilo, ukuphazamiseka kwenethiwekhi okanye ezinye iziganeko ezingaphaya kolawulo lweNkampani. ; ngokuxhomekeka ekubeni iNkampani yazise uMsebenzisi ngesizathu sokulibaziseka okanye ukungaphumeleli (kubandakanywa nokwaziswa kuMsebenzisi liziko lezemali okanye okhuphe intlawulo okanye abhambisi be-Intanethi)
3. Kwimeko apho inkampani iyimisa okwethutyana inkonzo ye-EFT ukulondolozwa okanye ukutshintshwa kolwazi kunye nezixhobo zonxibelelwano okanye amaziko, iya kwazisa Abasebenzisi ngeli xesha lokuphazamiseka kunye nezizathu emva koko kwiwebhusayithi yayo.
Inqaku 5. Isisombululo sempikiswano kunye nokuLamula
1. Umsebenzisi unokucela ukusonjululwa kwembambano njengamabango okonakalisa, aphakamise izimvo nezikhalazo ezinxulumene ne-EFTs kumntu ophethe kunye nomphathi wesisombululo sempikiswano ochazwe ngezantsi kwiphepha eliphambili lewebhusayithi yeNkampani.
2. Kwimeko apho uMsebenzisi athe wafaka isicelo sesisombululo sempikiswano kwiNkampani, iNkampani iya kwazisa umsebenzisi ngeziphumo zophando lwayo okanye ukusonjululwa kwembambano kwisithuba seentsuku ezilishumi elinesihlanu (15).
3. Ukuba uMsebenzisi uyala iziphumo kwisisombululo sempikiswano yeNkampani, unakho ukwenza isicelo sokulamla kumbambano kwiKomiti ejongene neeMeko zokuNgqinelana ngeMicimbi yezeziMali kwiNkonzo yokuLawulwa kwezeziMali phantsi kweNqaku 51 yomThetho wokuSungulwa kweKhomishini yeNkonzo zeMali okanye ukuHanjiswa kwabaNtu abaDibeneyo. Ikhomishini ye-Arhente yabathengi yaseKorea phantsi kweNqaku 31 Isiqendu 1 soMthetho weNkqubo-sikhokelo kuBathengi, ngokunxulumene neNkonzo ye-EFT yeNkampani.
Inqaku 6. (Umsebenzi woKhuseleko lweNkampani)
Ukuqhubela phambili ekuqinisekiseni ukhuseleko kunye nokuthembeka kwe-EFTs, Inkampani ithobela imigangatho ebekwe yiKhomishini yokuLawulwa kwezeMali ngokunxulumene ne-IT kunye neshishini lezezimali elekhompyuter elinje ngemithombo yabasebenzi, amaziko, izixhobo ze-Elektroniki zokuhambisa nokuthumela ngombane.
Inqaku 7. (Imigaqo ngaphandle kweMigaqo neMiqathango)
Yonke imicimbi engachazwanga apha (kubandakanya nenkcazo yemigaqo) iya kulawulwa yimithetho enxulumene nokukhuselwa kwabathengi, njengoMthetho wokuTshintshiselana ngeMali nge-Elektroniki, umThetho woKhuselo lwabathengi kwi-Intengiso ye-Elektroniki, njl. Yenza, kwaye wahlule imigaqo kunye neemeko.
Inqaku 8. Ulawulo
Yonke imbambano phakathi kweNkampani kunye naBasebenzisi iya kungeniswa kulawulo olusebenzayo ngokuhambelana noMthetho weNkqubo yePalamente.
Isahluko 2. I-Paypal
Inqaku 9. Ingcaciso
“I-PayPal” yinkampani ye-elektroniki yorhwebo (i-e-commerce) ehambisa iintlawulo phakathi kwamaqela ngokudluliselwa kwemali kwi-Intanethi. I-PayPal ivumela abathengi ukuba baseke iakhawunti kwiwebhusayithi yayo, edityaniswe nekhadi letyala lomsebenzisi okanye iakhawunti yokukhangela.
Inqaku 10. Ukhuseleko
1. Inkampani isebenzisa i-PayPal ukubonelela ngeyona nqanaba liphezulu lokhuseleko lweentlawulo ezenziwa kule webhusayithi. I-PayPal iqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi ngokufihlisa unxibelelwano ngokuhambisa ulwazi lwebhanki kwinethiwekhi, nangokugcina idatha yemali yomsebenzisi kuyo yonke inkqubo yoku-odola kunye nentlawulo.
2. Ukuba isebe lezokhuseleko liyakrokrela ubuqhophololo, iNkampani inelungelo lokurhoxisa ukuthengiswa ngenxa yezizathu zokhuseleko. Kwiimeko ezininzi, abasebenzisi baya kwaziswa ngesigunyaziso okanye imiba yobuqhophololo, ngaphambi kokuba abasebenzisi bayigqibe inkqubo yokuphuma.
3. Ii-odolo ezivela kwiwebhusayithi zinokuhlawulwa kusetyenziswa ikhadi lekhredithi, ikhadi letyala, okanye i-PayPal. Idatha yabasebenzisi bekhadi letyala ithunyelwa ngokukhuselekileyo kwiPayPal kwaye ayibonwa yiNkampani. Ngeenkcukacha zokhuseleko lwePayPal bona www.paypal.com/security.
Inqaku 11. Imbuyiselo
Inkampani iyakubuyisela ngenkqubo yembuyekezo yePaypal kubasebenzisi abavumelana nomgaqo-nkqubo wokurhoxiswa kweNkampani. Imali kufuneka ibuyele kubhalansi yomsebenzisi kwi-PayPal okanye kwikhadi letyala lomsebenzisi. Ukubamba okwethutyana: Ukuba imeko yokubuyiselwa komsebenzisi ibanjiwe, "lithetha ukuba ukuthengiselana kubuyiselwe imali ngaphambi kokuba kucime ibhanki yomsebenzisi. Le nkqubo ithatha i-3 ukuya kwiintsuku zomsebenzi we-5 ukuze igqitywe, kwaye imbuyekezo iya kudluliselwa kwimali yomsebenzisi yakuba inkqubo igqityiwe.
Isahluko 1. (Umhla osebenzeyo)
Esi sivumelwano siza kuqala ukusebenza ngoJuni 13, 2018.
Isahluko 2. (Umhla osebenzeyo)